Guryaha Stockholm oo 8 sano la sugayo | Somaliska
Guryo la’aanta ka jirta magaalada Stockholm ayaa ah mid aad u liidata iyadoo hada shirkada qaabilsan guryaha ee lagu magacaabo Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ay sheegtay in isku celcelis qofkii uu sugayo 8 sano inta uu guri ka helayo Stockholm.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa liiska guryaha Stockholm waxaa iska diiwaan galiyay dad gaaraya 400,000 oo qof taasoo ah kor u kac ilaa 9% ah. Maria Nordlöf oo ka tirsan shirkada guryaha ayaa dadka doonaya in ay Stockholm degaan waxay kula talisay in ay guri ka raadsadaan duleedka magaalada sida xaafadaha Huddinge, Upplands Väsby, Järfälla ama Botkyrka kuwaasoo xiliga sugitaanka uu isku celcelis yahay 6 sano.
Xaafada ugu safka dheer Stockholm ayaa noqotay Kungsholmen oo la sugayo ilaa 17 sano qofkii doonayo in uu halkaas guri ka kireysto. Guryo la’aanta ka jirta Stockholm ayaa keentay in dad badan oo shaqo ka heli lahaa magaalada aysan u suurto galin midaas maadaama aysan guri heli karin.
Arbetsförmedligen ayaa dadka kula taliya in ay u guuraan magaalooyinka waaweyn ee shaqooyinku ka jiraan balse guri la’aanta ayaa ah dhibaato aan xal loo hayn. Iyadoo ay guryo la’aantu jirto ayaa hadana sanadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Stockholm laga dhisay 1,700 guri oo cusub keliya.
Magac bixinta caruurta iyo waqtiga.
JIMCAALE WAANU FAHANAY TANE EE ARINTI JAWAABTA NOGA KENI LAHAYD MEDAY EE BARNAMIJKI LABADA SANO SXB BAL HOWSHA NOGA SO WARAN ADO MAHADSAN
jimcaalow dadkii labada sano maxaad war ka haysaaaaaaaaaaa
Wax cusub oo arintaas ku saabsan ima soo gaarin. Insha Allah markii aan helo warbixin cusub waan soo daabici doonaa. Laanta Socdaalka ama Maxkamada Socdaalka ma soo saarin go’aano cusub oo arimaha Soomaalida ku saabsan.
asc walayaal salan kadib ilaah ma ogola dadki wixi dhibayo in lagu cel celiyo marka dadkan kuhaya arintii 2 sano nogaso jawab waxan idin dhihi lahaa hado og yahay isagaba mar hore idin shegi lahaa intas ayan kuso kobaya hadalkeyga
JIMCAALE BRO AAD BAA UMAHADSANTAHAY ISHA ALLAAH WAR KHYR QABANA RAJENAYNAA
Daahhir Lacagley Bollnäs says:
Walalyal waxan daganay magaladha Stockholm muda gareysa Shaan Sano waaxana safka guriya kujiri muda Afaar sano. maarkas kadib oo ayn guri kawayay ayaan iskaga guriya waaxana u guraay tula lagu magacabo Bollnäs oo ka tirsan gobalka Gävleborgland gurii fican ayaan ka helay. Waxaan Somalidha kula talinaya Labadha Kommun waa kista iyo Spånga inay iskga gurayan Meshas meel walba waa isku miid Sweden. Waaxna kumabaraneysan guriyana kama heleysan ee iska soo guraa. Wixii guri Radhinaya Bollnäs haa laso xerirena Bollnäs Kommun Waa kommun ayd uu fican.
asc walal su aasheyda waxey ku sabsantahay dganka canacsiga hadan rabo inan meel furto yaan laxariira maxasa leega bahanyahay inan soo maro ma iskadka miyaa mise waa melkale
walaal asc jimcali sxb waxaan rabay inaad wax nooga sheegto maadaama dadke laisu ogolaaday kuwee wax dhalay kuwa an wax dhalen waa goore ayagana lafiiren doona go aan koga kuwa wax an